CarPlay သို့ Waze သို့မဟုတ် Google Maps များထည့်သွင်းနည်း ငါက Mac ပါ
CarPlay သို့ Waze သို့မဟုတ် Google Maps များထည့်သွင်းနည်း
အကယ်၍ သင်သည်နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များသတင်းကိုလိုက်နာခဲ့ပါက Apple CarPlay သည်အခြားမြေပုံများကိုဖွင့်သည်ကိုသင်သိလိမ့်မည်။ လောလောဆယ်နှင့် iOS 11 ဗားရှင်းအရ၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အကယ်၍ သင်မြေပုံဆွဲခြင်းတစ်ခုလိုပါက၎င်းသည် Apple Maps ဖြစ်ရမည်။ သို့သော် iOS 12 ရောက်ရှိလာပါကပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည် ဂူဂဲလ်မြေပုံများ (သို့) ရေပန်းစားသော Waze ဘရောက်ဇာစသည့်အခြားအပလီကေးရှင်းများကိုထပ်ထည့်နိုင်သည်.
အမှန်မှာပလက်ဖောင်း၏နောက်ဆုံးမူကွဲသည်လာမည့်စက်တင်ဘာလအထိအသုံးပြုသူများကိုရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ သို့သော် developer များအတွက်ပထမဆုံး beta သည် ဇွန်လ4မှရရှိနိုင် y ပထမဆုံးအများပြည်သူသုံး beta ကိုဇွန်လကုန်မှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်၏စက်ပေါ်တွင်သင်ကြိုးစားပြီးဖြစ်သော - သင်ဝံ့ပါကလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များရှိလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်သင့်သည်မှာ ပထမဆုံး iOS 12 beta ကိုသင့် iPhone တွင်တပ်ဆင်ပါ; iOS 11.4 ကိုသင်ထပ်တူလုပ်ပါက၎င်းသည်အချို့ကိုထည့်ရန်သို့မဟုတ်ဖျက်ရန်ကူညီလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ app ကို သင့်ရဲ့ယာဉ်မျက်နှာပြင်ကနေ။ အလားတူစွာ၊ application အားလုံးသည် CarPlay နှင့်မကိုက်ညီပါ။ သူတို့ဖြစ်လျှင်သူတို့မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်ပေါ်လာသည်။ ယခုတွင်၎င်း GPS လမ်းကြောင်းရွေးချယ်မှုနှစ်ခုထဲမှမည်သည့် Waze နှင့် Google Maps ကိုမဆိုထည့်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
လူအပေါင်းတို့၏ပထမ ဦး ဆုံးမှ ဦး «ချိန်ညှိချက်များ» အိုင်ဖုန်း၏နှင့် option ကိုရှာပါ "အထွေထွေ"။ အတွင်းသို့သင်ရောက်သည်အထိရွေ့ရမည် "CarPlay" ထပ်မံနှိပ်ပါ။ သင်ဤ application နှစ်ခုကိုသင်ထည့်လိုသည့်မော်တော်ယာဉ်ကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သင်မှတ်ပုံတင်ထားသောသို့မဟုတ်သင်၏ iPhone နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်ကားစာရင်းအပြည့်အစုံပေါ်လာလိမ့်မည်။
CarPlay သည်သင်၏မော်တော်ယာဉ်နှင့်မည်သို့ဖြည့်သွင်းမည်ကိုမြင်တွေ့ရမည့်အချိန်တွင်သင့်အားပြသမည့်အချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အောက်ခြေတွင်ထပ်ထည့်။ မရသေးသောတွဲဖက်အက်ပ်များကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ၎င်းကို၎င်းတို့ကိုစာရင်းထဲသို့ထည့်ပေးမည့်အိုင်ကွန်သေးငယ်သည့် (+) နှင့်အတူလိုက်ပါလာသည်။ ဒါ CarPlay ၌ပျော်မွေ့ရန် Waze သို့မဟုတ် Google Maps နှင့်သင်လုပ်ရမည့်အရာဖြစ်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » CarPlay သို့ Waze သို့မဟုတ် Google Maps များထည့်သွင်းနည်း
ယောက်ျားများ၊ ဤအရာသည်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ သင် Beta တွင်ရှင်းလင်းစွာရှင်းပြသင့်သည် - ၎င်းကိုမရရှိနိုင်ပါ။
ဒီဟာငါ့အတွက်လည်းအလုပ်မလုပ်ပါဘူး iOS6 Beta 12 နှင့် Waze နှင့် Google Maps ထည့်သွင်းထားသော iPhone X များတွင်လည်းကောင်း၊ ၆ တွင်လည်းကောင်းမပါ ၀ င်ပါ။
ios 12 beta2ကိုအသုံးမပြုပါ
ဇူလိုင်လကို C ဟုသူကပြောသည်
Beta3မှာအလုပ်မလုပ်ဘူး
အလုပ်မလုပ်ဘူး beta 8
သူ Mike ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ iO12, Waze သို့မဟုတ် Google Maps များကိုကျွန်ုပ် Car Play ထဲသို့ထည့်ရန် + သင်္ကေတဖြင့်မပေါ်ပါ။ မဆိုအကြံပြုချက်? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
SimCity4Deluxe Edition ဂိမ်းကို ၀ ယ်ရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်